भ्रष्टाचारको आहालमा सुशासनको खोजी ! | गृहपृष्ठ
Home लेख | दृष्टिकोण भ्रष्टाचारको आहालमा सुशासनको खोजी !
on: February 22, 2019 लेख | दृष्टिकोण
दोषी कर्मचारी कि राजनीतिक नेतृत्व
भ्रष्टाचार नियन्त्रणको अभियानमा सक्रिय हुनुपर्ने अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका आयुक्त नै भ्रष्टाचारमा मुछिएको सन्दर्भ विस्तारै सेलाउँदै छ । अख्तियारले जाँचुबझ समिति बनाएर अनुसन्धान थालेको बताइएको छ, तर समयान्तरमा यो प्रकरण ओझेलमा पर्‍यो भने कुनै आश्चर्य हुने छैन । छानविनको आवरण दिइएका संयन्त्र तत्कालीन विवाद सामसुम पार्ने कर्मकाण्डबाहेक अन्य लाग्न छोडिसकेका छन् । लाखौं रूपैयाँ घूस लिएको भिडियो सार्वजनिक भएपछि महाअभियोगको डरले राजीनामा दिएर हिँडेका आयुक्त राजनारायण पाठक एउटा पात्रमात्रै हुन्, शक्तिको संरक्षणमा भ्रष्टाचारको आहालमा डुब्ने र बदमासी चुहिएपछि अस्वाभाविक तरीकाले बाहिरिने प्रवृत्ति भने औसत हो ।
घूस प्रकरणमा मुछिएका आयुक्तलाई कसले कारबाही गर्ने भन्ने अन्योलबीच बनाइएको छानविन समितिले कुन तहसम्मको निष्कर्ष निकाल्छ वा निचोडको कार्यान्वयन कस्तो होला ? यो अहिले प्रतीक्षा र आशंका दुवै विषय हो । २ तिहाई बहुमतसहित शक्तिशाली सरकारको नेतृत्व गरिराखेका प्रधानमन्त्रीको कार्यालयले यो भिडियो ४ महीनाअघि नै फेला पारे पनि प्रतिक्रियाविहीन बस्नुले सन्देहको दायरालाई स्वाभाविक रूपमा थप विस्तार गरेको छ । समृद्धि र सुशासनको कुरा गरेर नथाक्ने सरकार व्यवहारमा भने शक्ति सन्तुलनको मूल्य र मान्यताविपरीत हिँडेको अनुभूति चौतर्फी छ । शक्तिशाली भनिएको सरकारको शक्ति सुशासनको प्रत्याभूतिमा निरीह सावित हुन्छ, किन ? स्पष्ट छ, सत्ता सञ्चालक कुनै न कुनै तरिकाले भ्रष्ट आचरणको आवरण बनिराखेका छन् ।
कर्मचारीहरू घूससहित पक्राउ नपरेका दिन विरलै होलान् । यसलाई नियन्त्रणका निकायको सक्रियता ठान्ने कि भ्रष्टाचारको बढ्दो सघनता ? दुई÷चार हजार रूपैयाँ घूससहित कर्मचारी रंगेहात समातिएका समाचार दैनिकजसो समाचारमाध्यममा आउँछन् । यसरी समातिने अधिकांश तल्लो तहका कर्मचारी छन् । उनीहरूलाई सोझै थुनामा राखिन्छ । तर, उच्च पद र शक्तिको आडमा करोडौं/अर्बौं अकुत सम्पत्ति जोड्नेहरू समाजमा छाती फुलाएर हिँडिराखेका छन् । सरकार नामको संयन्त्र प्रकारान्तरले यस्ता आचरणको संरक्षकको भूमिकामा प्रकट हुनुले पर्दापछाडिको साँठगाँठको अनुमान त्यति असहज रहेन ।
भ्रष्टाचारविरूद्धको अभियानमा क्रियाशील अन्तरराष्ट्रिय संस्था ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेशनलले हालै सार्वजनिक गरेको ‘करप्सन पर्सेप्सन इन्डेक्स २०१८’ मा नेपालले सुशासनमा सुधार गर्न नसकेको तथ्य समेटिएको छ । विश्वका १८० देशमा गरिएको भ्रष्टाचारको सघनतासम्बन्धी अध्ययनमा नेपालको सुशासन खस्किएको पाइएको छ । नेपाल ३१ सूचकांकसहित १२४ औं स्थानमा छ । अघिल्लो वर्षको अध्ययनमा १२२ स्थानमा रहे पनि सूचक ३१ नै थियो । राजनीतिक र प्रशासनिक सुधारको गफ जति चुटिए पनि भ्रष्टाचार नियन्त्रण नहुनुलाई प्रतिबद्धता र नियतबीचको विरोधाभासको प्रमाण मान्न सकिन्छ ।
सरकार, न्यायालय, संसद्, सार्वजनिक निकाय र सेवा प्रवाह, सुरक्षा, उद्योग व्यापार लगायत प्रक्रियागत पद्धतिलाई आधार मानेर गरिएको अध्ययनमा नेपालमा यस्ता औसत आयाम कमजोर सावित हुनु नै सुशासनको व्यवधान हो । अध्ययनले ४० अंकभन्दा कम ल्याउने देशलाई उच्च भ्रष्टाचारयुक्त देशको सूचीमा राखेको छ । ट्रान्सपरेन्सीले सन् १९९६ देखि प्रत्येक वर्ष भ्रष्टाचार अनुभूतिको सूचक सार्वजनिक गर्दै आएको छ । नेपालमा सन् २००४ देखि भ्रष्टाचारको घनत्व मापन गर्न थलिएको हो । तर, अहिलेसम्म उच्च भ्रष्टाचारको सूचीबाट बाहिर निस्किन सकेको छैन । नेपाल दक्षिण एशियामै सबैभन्दा बढी भ्रष्टाचार हुने क्रमशः अफगानिस्तान (१६ अंक, १७२ औं स्थान) र बंगलादेश (२६ अंक, १४९ औं स्थान)पछिको तेस्रो स्थानमा छ । कतिपयले अहिले सार्वजनिक सुशासन सूचकांकलाई वर्तमान सरकारको दक्षतासँग दाँज्न नमिल्ने तर्क गरेको पनि सुनिन्छ । तर, सतहमा आइराखेका भ्रष्टाचारका लज्जाजनक सन्दर्भलाई के भन्ने ? भ्रष्टाचार नियन्त्रणको संवैधानिक अंगकै आयुक्तले घूस खाएको भिडियो सार्वजनिक हुने देशमा सुशासनका प्रवचनलाई पत्याइराख्नुपर्ने आधार फेला पार्न सकिएको छैन ।
व्यक्तिगत लाभका लागि हुने अधिकारको दुरूपयोग भ्रष्टाचार हो । भ्रष्टाचारलाई आर्थिक अपराधको रूपमा बढी बुझिए पनि सार्वजनिक सरोकार र मूल्यमान्यता विरुद्धको आचरणसमेत भ्रष्टाचार नै हो । ट्रान्सपरेन्सीले भ्रष्टाचारलाई राजनीतिक, उच्च तहमा हुने नीति तथा प्रक्रियागत र तल्लो तहमा वर्गीकरण गरेको छ । अहिले सतहमा देखिएका कारबाही तल्लो तहको भ्रष्टाचारमा केन्द्रित छ । राजनीति र उच्च तहको भ्रष्टाचारलाई संरक्षण प्राप्त छ । राजनीतिक संरक्षण प्राप्त उच्च तहको भ्रष्टाचार नीति र वैधानिक व्यवस्थापनको दुरुपयोगबाट भइरहेको छ । प्रजातान्त्रिक पद्धति सुशासनको आधार बन्नुपर्ने हो । तर, कतिपय कानून हेर्दा संसद् भ्रष्टाचारी र माफियाको संरक्षक हो कि भन्ने भान पर्नु अस्वाभाविक होइन ।
ट्रान्सपरेन्सीकै एउटा अर्को अध्ययनले नेपालको राजनीतिक तह सबैभन्दा बढी भ्रष्ट भएको तथ्य बाहिर ल्याएको थियो । जनताले खाइनखाई तिरेको करबाट नेतृत्वको सुविधा अभिवृद्धि र फजुल खर्चलाई निरन्तरता दिइएकै छ । भ्रष्टाचार नियन्त्रणको कानून र निकाय त निरीहहरूका लागिमात्र बनेको हो कि भन्ने परेको छ । भ्रष्टाचार नियन्त्रणको ‘प्रभावशाली’ अंग ठानिएको अख्तियारका पदाधिकारीहरूबाटै अख्तियार दुरुपयोग भएका उदाहरण खोज्न धेरै दिमागी कसरतको खाँचो पर्दैन । तर, अख्तियारको अंकुश छल्न झीनामसिना कामसमेत मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय गराउने गलत अभ्यास भइराखेको छ । यो सत्ताका आडमा भ्रष्टाचारलाई वैधानिकता दिने प्रपञ्चबाहेक अन्य होइन ।
अख्तियारको अभीष्ट र त्यहाँका पदाधिकारीको औसत विरोधाभासको निकास जरुरी भएजस्तै राजनीतिक नेतृत्वको मनपरीमा पनि लगामको अभाव खट्किएको छ । भ्रष्टाचार नियन्त्रणका निम्ति अख्तियारलाई जिम्मेवार र पारदर्शी बनाउन जति आवश्यक छ, त्यति नै सरकार र सत्ता सञ्चालक इमान्दार नभई हुँदैन । अख्तियार, सतर्कता केन्द्र, महालेखा परीक्षकजस्ता निकाय भ्रष्टाचार नियन्त्रणका निकाय भए पनि सुशासन र विधिको शासनको प्रत्याभूति मुख्य दायित्व हो । यो उद्देश्यका आधार मानिएका निकायका नेतृत्वकर्ताको विवादास्पद छवि र निर्णयले सुशासनमा आशावादी हुने आधार निर्माण गरिराखेको छैन । नियुक्तिका वैधानिक परिषद्बाट सिफारिश भएकाहरू संसदीय सुनुवाइमा फालिएका प्रसंग पनि शीर्ष नेतृत्वको स्वार्थ र अदूरदर्शिताको प्रमाणको रूपमा दर्ज भएकै छन् । स्वार्थ मिल्दासम्म भ्रष्ट आचरणलाई बुई बोकेर आसनमा पु¥याउनेहरू स्वार्थ बाझिएपछि हठात महाअभियोगको अस्त्र लिएर उत्रिएको घटना पुरानो भइसकेको छैन ।
विश्व बैंकको एउटा अध्ययनमा आर्थिक सुधारले सुशासनलाई सघाउने निष्कर्ष निकालेको थियो । नेतृत्वले कम्तीमा १० वर्ष भ्रष्टाचार निवारणमा इमानदारी अपनाउने हो भने सेवाग्राहीले सुशासन अनुभूत गर्न सक्ने अध्ययनले देखाएको छ । हामीकहाँ आर्थिक समृद्धि र सुशासन हात्तीको देखाउने दाँतजस्तो भएको छ । सरकार पारदर्शिता र सुशासनमा दरिन सकेको छैन । राष्ट्रसंघीय दिगो विकास लक्ष्यले सुशासनलाई मुख्य आधार मानेको छ । पारदर्शिता र सूचनामा नागरिकको सहज पहुँच सुशासनको औजार हो । विश्वका १२० देशले सूचनाको हकसम्बन्धी कानून बनाएका छन् । तर, भ्रष्टाचारमा अग्रस्थानमा दर्ज देशमा कानून भएर पनि कार्यान्वयन कमजोर छ । एशिया प्यासिफिक क्षेत्रका राष्ट्रमा सूचनाको हकको कानूनी प्रत्याभूति कमजोर रहेको निष्कर्ष ट्रान्सपरेन्सीको छ । भ्रष्टाचारमा १४९औं स्थानमा रहेको बंगलादेशमा सूचनाको हकसम्बन्धी कानून नै छैन । हामीकहाँ कानून छ, तर पछिल्ला अन्य कानूनी प्रावधानबाट सरकारले सूचनाको अधिकार उपयोग र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामा अंकुश लगाउने उद्देश्य राखेको स्पष्ट हुन्छ । ट्रान्परेन्सीले समेटेको एउटा अर्को अध्ययनले नेपालको प्रेस स्वतन्त्रतालाई आंशिक स्वतन्त्र भनेको छ ।
अहिले सत्ता सञ्चालकहरू समृद्धि र सुशासनमा अपेक्षाकृत काम गर्न नसक्नुको दोष कर्मचारीमाथि खन्याउन उद्यत देखिन्छन् । कर्मचारीतन्त्रमा अनगिन्ती समस्या होलान्, यसमा विवाद छैन । तर, नेतृत्वको इच्छाशक्तिको अगाडि कर्मचारीको बदनियतमात्र सुशासनमा लगाम बनिराखेको भन्ने तर्क कदापि तथ्यपरक होइन । एउटा नेता इमानदार भइदियो भने सुशासन असम्भव होइन भन्ने उदाहरणका निम्ति डा. बाबुराम भट्टराईको अर्थमन्त्रीकाललाई लिन सकिन्छ । कमाउ अड्डाका रूपमा ‘कुख्याति’ कमाएको भन्सारमा त्यसताका ‘दस्तुरी’ बन्द हुनुलाई व्यवसायीहरू अहिले पनि ‘आश्चर्य’को रूपमा स्मरण गर्छन् । भट्टराईको बहिर्गमनसँगै त्यो स्थितिले निरन्तरता पाउन नसक्नुचाहिँ सुशासनको अवरोध हो । दुई तिहाइको दम्भयुक्त कार्यपालिकाका अगाडि राज्यका अन्य अंग र संवैधानिक आयोगसमेत निरीह साबित भइराखेको अवस्थामा कर्मचारीमाथिको दोषारोपण सुशासनको दायित्वबाट पन्छिने दाउबाहेक अन्य होइन ।
सुशासनका लागि सूचनाप्रविधिको विस्तार